လက်ဘနွန်နိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ ပြိုကျမည့်အန္တရာယ် ရှိနေကြောင်း WHO ပြောကြား - Xinhua News Agency
လက်ဘနွန်နိုင်ငံ ထရီပိုလီမြို့ရှိ ဆေးရုံတစ်ရုံ၌ ဩဂုတ် ၁၆ ရက်တွင် သူနာပြုတစ်ဦးက ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် မီးလောင်ဒဏ်ရာရရှိသော လူငယ်တစ်ဦးအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပေးနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဘေရွတ် ၊ စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း(WHO)က လက်ဘနွန်နိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်သည် နိုင်ငံတွင်း ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ပြည်ပထွက်ခွာသွားခြင်း(ဦးနှောက်ယိုစီးမှု) နှင့် ဆေးပစ္စည်းများ ၊ လောင်စာဆီ ရှားပါးပြတ်လပ်မှုတို့ကြောင့် ပြိုကျမည့်အန္တရာယ် ရှိနေကြောင်း စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်တွင် သတိပေးပြောကြားခဲ့သည်။
ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး နှင့် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် သူနာပြု ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးသည် လက်ဘနွန်နိုင်ငံမှ အမြဲတမ်း သို့မဟုတ် ယာယီ ထွက်ခွာသွားကြောင်း WHO အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူး Tedros Adhanom Ghebreyesus က ဘေရွတ်မြို့သို့ နှစ်ရက်ကြာ သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
လက်ဘနွန်နိုင်ငံအတွင်း ကျန်ရှိသည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ထမ်းများသည် အရင်းအမြစ်အနည်းငယ်ဖြင့် လူများ၏ အသက်ကို ကယ်ဆယ်နေရကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
လောင်စာဆီပြတ်လပ်မှုက ဆေးရုံအများစုကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသာ လည်ပတ်နိုင်စေခဲ့ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဆေးဝါးများ နှင့် ဆေးပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်းအား ပြင်းထန်စွာ ကန့်သတ်ထားသည့် နိုင်ငံခြားငွေကြေး ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အတူ အခြေခံ နှင့် အသက်ကယ်ဆေးဝါးများမှာ ရှားပါးလာကြောင်း ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။
WHO က လက်ဘနွန်နိုင်ငံအား ဆက်လက်ထောက်ပံ့မည်ဟု ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။”ကျန်းမာရေးအတွက် ရေရှည်မဟာဗျူဟာတွေ ချမှတ်နေတဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ လက်ဘနွန်နိုင်ငံမှာ အရင်ဆုံး အသက်ကယ်ဆယ်ရေး အလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားဖို့ ကတိပြုပါတယ်။ လက်ဘနွန်နိုင်ငံမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်တစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့ ဒီအကြပ်အတည်းကို အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် နိုင်ငံတွင်း တာဝန်ရှိသူတွေ ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသိုင်းအဝိုင်းတို့နဲ့အတူ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။”ဟု WHO က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ (Xinhua)
Lebanon’s health sector “at risk of collapse”: WHO
BEIRUT, Sept. 19 (Xinhua) — The World Health Organization (WHO) warned on Sunday that Lebanon’s health care system is at risk of collapse due toabrain drain andashortage of medical goods and fuel in the country.
“Almost 40 percent of skilled medical doctors and almost 30 percent of registered nurses left Lebanon either permanently or temporarily,” WHO said inastatement released afteratwo-day visit to Beirut by WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus.
WHO reiterated its continued support to Lebanon. “We remain committed to continuing our immediate, lifesaving work in Lebanon, while also planning for longer-term strategies for health… We can use this crisis as an opportunity to buildabetter health care system in Lebanon, and work with national authorities, partners, and the international community for positive health sector reform,” WHO noted. Enditem
Photo – A nurse examinesayoung man who was exposed to fire in the Akkar explosion, atahospital in Tripoli, Lebanon, Aug. 16, 2021. At least 28 people were killed and 79 others injured inafuel tank explosion in the town of Tleil in Lebanon’s northern district of Akkar Sunday morning, the National News Agency reported. (Photo by Khaled /Xinhua)